Nokuda kwomutungamiriri weGititi.+ Rwiyo rwevanakomana vaKora. 84 Tebhenekeri yenyu huru yakanaka sei,+Haiwa Jehovha wemauto!+ 2 Mweya wangu wasuwa zvivanze zvaJehovha uye waperawo simba nokuda kwazvo.+Mwoyo wangu nenyama yangu zvinoshevedzera nomufaro kuna Mwari mupenyu.+ 3 Kunyange shiri yakawana imba,Nenyenganyenga yakazviwanira dendere,Mayakaisa vana vayo—Ipo paatari yenyu huru, haiwa Jehovha wemauto, Mambo wangu naMwari wangu! 4 Vanofara vaya vanogara muimba yenyu!+Vachiri kuramba vachikurumbidzai.+ Sera. 5 Vanofara vanhu vanowana simba ravo kwamuri,+Vane mwoyo inofunga nezvemigwagwa mikuru.+ 6 Vachipfuura nomubani remakwenzi emiti inonzi mibheka,+Vanoriita chitubu chemvura;Murayiridzi+ anozviputira nezvikomborero. 7 Vacharamba vachifamba vachiwedzera simba pamusoro perimwe simba;+Mumwe nomumwe anozviratidza kuna Mwari muZiyoni.+ 8 Haiwa Jehovha Mwari wemauto, inzwai munyengetero wangu;+Teererai, haiwa Mwari waJakobho.+ Sera. 9 Haiwa imi nhoo yedu, onai, haiwa Mwari,+Tarirai chiso chomuzodziwa wenyu.+ 10 Nokuti zuva rimwe chete muzvivanze zvenyu rinopfuura ane chiuru kune imwe nzvimbo.+Ndakasarudza kumira pachikumbaridzo muimba yaMwari wangu+Panzvimbo pokufamba-famba mumatende ezvakaipa.+ 11 Nokuti Jehovha Mwari izuva+ nenhoo;+Anopa nyasha nokukudzwa.+Jehovha haazonyimi vaya vanofamba vasina mhosva chero chinhu chipi zvacho chakanaka.+ 12 Haiwa Jehovha wemauto, anofara munhu anovimba nemi.+